उनीसँग बिताएको दुई रात (कथा)
खना खायौं, उसको जीस्कने बानी, चन्चले स्वभाब, बैंसालु यौवन सबै मेरो अगाडी थियो । तिमी एकछिन सुत म कपडा धुन्छु भनि उसले । रातभरीको अनिदो थिएं, उसको बेडमा निदाएं । २ बजे उसले उठाएर भनि अव राति सुत मेरो सपिङ गर्नु छ, सिटी सेन्टर जाउँ । हामी कमलपोखरी स्थीत सिटी सेन्टर पुग्यौं, उसले चाहिएजती सामान किनी, १५ हजारको बिल भएछ, मैले नै तिरिदीएं ।मुभी हेरेर फर्कने सल्लाह भयो, फिल्म सकेर राती फर्कीयौं हामी । बाहिरै खाना खाएर जाने भन्न थाली उसले, क्यान्डील नाईट डिनरको उसको रोमाञ्चकतामा मैले साथ दिएं ।
आजै भेटेकी युवती मलाई जन्मौं पुरानी प्रेमीका लाग्दैथिई । हामी एउटै ओछ्यानमा थियौं, मैले एक पटक पनि आफ्नो ५ बर्षको छोरा र शुशिल श्रीमतीलाई सम्झीईन । पश्चतापको त कुरै थिएन म सन्ध्यालाई माया गर्थे ।समर्पणकै कुरा गर्ने हो भने म एउटा बिबाहितले के त्यागें होला र जबकी एउटा अन्जान ब्यक्तीको अंगालोमा बिश्वासको भरमै आफुलाई हराईदीई उसले । यो मन, तन र जीवनमा तिम्रो पुरापुर अधिकार छ समीर उसले बढो भावुक भएर भनेकी थिई ।
मलाई ५० हजार पठाईदेउ । तिमीलाई दुख दिन मन थिएन तर भन्ने कोही नभएर मागेको । उसको बोलीबाट यो प्रस्ट हुन्थ्यो की उ अप्ठेरोमा छे । मैले भोली पठाईदिन्छु भनें । घर गएं, भाईले आमालाई सिक्री बनाईदिनु भनेर ७० हजार पैसा पठाएको थियो हिजो मलेशियाबाट । त्यो पैसा घरमै थियो ।मैले एउटा काममा लगानी गर्नु पर्यो म १ महिनामा बनाईदिन्छु भनेर पैसा मागें । आमा के काममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, राम्रो काम हो पछि भन्छु भनेर टारें । भालीपल्ट ५० हजार उसको अकाउण्टमा हालिदिएर २० हजार आफ्नो अकाउण्डमा राखें । उसले खुषी हुंदै धन्वाद दिई फोनबाट ।
उसको मायाको प्रमाण यहि थियो । सांझतिर श्रीमतीको फोन आयो म घर आउँदैछु हजुरको गोडाको पानि खाएर फर्कन्छु ।
उ केहि नबोली कोठामा आई पछि पछि लागें म । कोठामा आएपछि उ झगडा गर्न थाली, मैले तपाईलाई आँखा चिम्लीएर बिश्वास गरें, जहाँ गएपनि जतिबेला आएपनि कैलेहि सोधिन । यहि बिश्वासको फाईदा उठाएर काठमाडौ सम्म केटी भेट्न पुग्नुभयो । सबलाई ढांटेर तेत्रो पैसा त्यो केटीलाई खर्च गर्दा सम्म म सोझी लोग्नेले राम्रै गरेको होला भन्ने सोचीरहें उ रुन थाली ।
कैलेही नरिसाउने र नबोल्ने मेरी श्रीमती ठुलो स्वरमा बोलेकी थिई, त्यो पनि मेरो गल्ती समाएर । ७ बर्ष सम्म कैलेहि गुनासो नगरेकी श्रीमती रोईरहेकी थिई । मैले फकाउने कोषीश गरें तर आज उ हिजोकी श्रीमती भएर प्रस्तुत भईन । झगडाले ठुलै रुप लियो, जति सम्झाउँदा पनि उ साम्य नभएछि जे मन लाग्छ गर मेरो गलफ्रेण्ड हो उ भनिदिए रिसको झोकमा ।उ अहिले नै यो कुरा आमालाई भन्छु र यो घरमा बस्दीन भन्दै उठी, आमलाई भन्न जान्छु भन्ने कुराले साह्रै औडाह भयो मलाई, रिसमा पुरोहितले बेद पढ्दैन भन्ने उखान झैं भयो, ढोकामा पुगेकी श्रीमतीलाई फर्काउन खोज्दा नमानेपछि हात छोडें मैले ।
भात नखाई अफिस गएं, सन्ध्यालाई फोन गरें उसले फोन उठाईन, पछि फोन काट्न थाली, म्यासेज पठाई मलाई फोन नगर भनेर । बिचरा साथीहरु संग नैनिताल जान नपाएर रिसाकी होली रिस शान्त भएपछि फोन गर्छे भनेर ढुक्क भएं । साँझ अबेर घर फर्कीएं, आमाको अगाडी पर्न मन थिएन, आफ्नो कोठामा छिर्दै थिएं जेठानको फोन आयो, फोन उठाएको के थिएं जेठान कराउन थाले ।’ के हो तपाईको पारा, यत्तीको पढेलेखेको मान्छेले लाज पनि मान्नु पर्ने, मेरो बैनी सस्तो भएर दिएको होईन, तपाईले जति उसले पनि पढेकी छ, ईज्तको परिवारकी छोरी भएर घर सम्हालेर बसेकी छ । ‘उनि बक्कीए., के जवाफ दिनु, होईन भन्ने बाटो नै थिएन, माफ पाउँ जेठान भन्न बचेंखुचेको अभिमानले दिएन, फोन काटीदिएं ।छोरा नहुँदा घर सुन्य भएको थियो अरु खाषै केहि भएन, ससुरालीले ठुलो कुरा गर्न थाले भने सन्ध्यालाई ल्याएर देखाईदिन्छु भन्ने सम्म सोचें दुईवटा श्रीमती कसको हुन्न र ?
सन्ध्याको कारण यो तमासा भएको छ घरमा,उ भने पैसा नपाएर रिसाई । मैले उसलाई गरेको माया र सहयोग भुली उसले । त्यो दिनबाट उसको फोन उठेन । श्रीमती माईतमानै थिई, आमा उसलाई र छोरालाई भेट्न गएको थाहा हुन्थ्यो । मेरो र आमाको बोलचाल कम भएको थियो ।
उसको उत्तर यस्तो थियो, तिमी आँफैले मलाई फेसबुकमा एड गरेको हौ, तिम्रो स्वभाव जस्तो थियो मैले त्यस्तै ब्यवहार र कुरा गरें । तिमी साहित्यमा राम्रो ज्ञान भएको मान्छे हौ भन्ने थाहा पाएर मैले आफुलाई साहित्य मन पर्ने भनेको थिएं ।
तिमीलाई के लाग्यो म एउटा छोराको बाउलाई ब्वाईफ्रेण्ड बनाउँला ? बाँकी रह्रो तिमीले गरिदीएको सपिङ र ५० हजार पैसा त्यो त मैले तिमी संग बिताएको २ रात मै चुक्ता भै सक्यो ।